को हुन् यी ज्योतिषी जसले ऐश्वर्या रायकी छोरी आराध्यालाई देशको प्रधानमन्त्री हुन्छिन् भन्ने ? – OSNepal
को हुन् यी ज्योतिषी जसले ऐश्वर्या रायकी छोरी आराध्यालाई देशको प्रधानमन्त्री हुन्छिन् भन्ने ?
आराध्या बच्चनको भविष्यको भविष्यवाणी गर्ने क्रममा एक ज्योतिषीले यस्तो कुरा भने कि सुनेर बच्चन परिवारसहित सिंगो देश चकित भएको छ । ऐश्वर्या र अभिषेककी स्मार्ट छोरी आराध्या पढ्न र लेख्नका साथै नृत्य र गाउनमा छिटो छिन्। केही वर्षअघि एक ज्योतिषीले आराध्याको बारेमा ठूलो भविष्यवाणी गरेका थिए । यो सुनेपछि बच्चन परिवारसँगै पुरै देश छक्क परेको थियो ।
यी ज्योतिषीका अनुसार आराध्या बलिउडमा नभई राजनीतिमा जानेछिन् र त्यति मात्र होइन उनी देशको प्रधानमन्त्री पनि बन्नेछिन् ।